Hetsika Mandao Fonenana: Mandrisika ireo tanora Angoley hisaraka amin’ny ray aman-dreniny ny fironana vaovao ao amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2018 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Italiano, Português
Saingy tsy tena afaka miala ny ankamaroan'izy ireo satria raikitra ao an-trano. Misarika ny saina amin'ny zava-misy ny hetsika fa maro ny tanora Angoley no mijanona ao an-trano noho ny krizy ara-bola maharitra, tsy fisian'ny asa ho an'ny tanora izay tafakatra manodidina ny 56 isanjato .
Lasa lamaody ny Hetsika Mandao Fonenana taorian'ilay fihaikana sary-sy-soratra malaza antsoina hoe ‘Novonoinao aho‘ izay nampifoha an'i Angola ahitana tanora nanohitra ny tsy firaharahian'ny governemantany amin'ny fikarakarana ny filàna fototra.
Ny 21 Jolay 2018, tanora an-jatony no nanao diabe tao an-drenivohitra Luanda nanohitra ny tsy fananan'asa goavana, ary nitaky ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny Filoha Angoley João Lourenço tamin'ny famoronana asa miisa 500.000 .
Araka ny fanadihadiana natao momba ny fiakaran'ny vidim-piainana izay namakafaka ny saran'ny sokajy miisa 200, anisan'izany ny trano sy ny fitaterana, iray amin'ireo tanàndehibe lafo fiainana indrindra manerantany amin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tanàndehiben'i Luanda.
Nanatevin-daharana ny fanentanana ny Hetsika Mandao Fonenana i Fernanda Januário NGuami Maka, mpianatra serasera ao amin'ny Oniversite tsy miankina iray ao Angola, tamin'ny alalan'ny fizarana ny sariny izay mampiseho azy nandao ny tranon'ireo ray aman-dreniny. Ankoatra ny fihomehezana kely, dia mahita ity fironana ity ho endrika fanoherana ny toe-javatra misy ankehitriny ao Angola izy.
Roahy eto aho, tsy manangana politikan'ny asa ianareo, manararaotra ny fanamiana mba handrahonana sy hangalana vola amin'ny mpamily taksy.
Na izany aza, nanoratra tao amin'ny pejiny Facebook niaraka tamin'ny fahakiviana i Graça Isabella Sebastião , tovovavy iray hafa izay nanatevin-daharana sy nanohana ilay hetsika :
Miaraka amin'ireo tanora Angoley an'arivony izay maniry ny handao ny akanin'ny ray aman-dreniny, maro ireo nanomboka vondrona Facebook manana ny anarana hoe Hetsika Mandao Fonenana.